Torolàlana ho an'ny mpizahantany iray ho an'ny Budget Friendly Dubai - Tsidiho ny UAE!
Torolàlana ho an'ny mpizahantany ho an'ny Budget Friendly Dubai
Perla ao Soisa
Ny Gems and Jewelry Industries ao Dubai
navoakan'ny Dubai City Company at Enga anie 14, 2019
Torolàlana iray an'ny mpizahatany amin'ny Budget Friendly Dubai, Rehefa mbola tsy niatrika izany ianao Tanàn-dehibe ao Dubai ao 2020. Fa te hiaina ny fahitana any an-tanàna nefa tsy mihady lavaka ao am-paosinao, dia tsy tokony hitsambikina amin'ireto famatsiam-bola ireto ianao ary indray mandeha amin'ny traikefa mandritra ny androm-piainana.
Manana be dia be i Dubai na avo ianao amin'ny fitsangatsanganana, na mpampivarotra sakafo, divay na filalaovana mozika sy natiora, na faniriana fotsiny mba hitondra ny zanakao ho an'ny fiainana niainany miaraka amin'ny fiarovana sy fahadiovana tanteraka. Mirary fotsiny zavatra ho anao sy ny tanàna ho anao!
Ny folo fara-tampony dia tsy maintsy mitsidika / traikefa soso-kevitra eto:
1. Ny Desert Safari & Dune Bashing
Eto ianao dia mahita ny fomba Arabo nentim-paharazana mankalaza ny fasika volamena… misy ny rameva, ny fitsangatsanganana an-tanety ao amin'ny Land Cruiser ao anaty fasika, fisakafoanana. traikefa amin'ny fomba arabo Ny dihy amin'ny dihy amin'ny alàlan'ny dihy velona, ​​ny tombokavokala henna arabo, fotoam-pianarana amin'ny fiteny arabo dia miakanjo firavaka, dihy afo ary fampisehoana mandihy tanoura. Ny tolotra sasany dia misy koa mitaingina fasika (na afaka mitondra ny anao manokana), quing biking sns.
Torohevitra mba hahatsiarovana:
Mitafy akanjo tsara, mitandrema ny hazavana feno hazavana
Mitondra kiraro misokatra
Mitadiava volo mifamatotra
Mitondrà SPF ambony & marary tsara
Mitondra tavoahangy sy sakafom-bary ampy tsara manomboka amin'ny hariva.
COST: Ny vidin'ny tapakila dia samy hafa amin'ny AED 70 isaky ny olona AED 250 isaky ny olona miankina amin'ny orinasa mpizaha-tany izay mametraka ny fonosana miaraka aminao.
Fantaro bebe kokoa Visa mankany Dubai.
2. Tsidiho ny Majestic Burj Khalifa, loharano ao Dubai & ny Mall Dubai
Mieritrereta an'i Dubai & tsy afaka manadino izany ianao. Ny avo indrindra, ny tsara indrindra & ny lehibe indrindra eto an-tany.
Raha matahotra amin'ny avo ianao ary te-hahatsapa hatrany ny hatsaran'ity talanjona injeniera ity, Afaka mitsidika an'i Dubai Mall ianao & jereo ny loharano sy ny fampisehoana jiro laser ao amin'ny Burj Khalifa, raha ny antsasaky ny fampirantiana ny mozika dia isaky ny antsasaky ny ora, ny fandaharana jiro laser amin'ny tilikambo avo indrindra dia manana fandaharam-potoana, diniho mialoha ny pejin'ny media sosialy ary andramo.
Soraty mialoha ny tapakilanonao raha mila fitsangatsanganana i Burj Khalifa.
Tsidiho mandritra ny ora tolakandro mba tsy hisehoanao eo amin'ny jiro.
Manaova kiraro mampionona kiraro, misy ny fanampian'ny seza misy kodiarana.
COST: Maimaimpoana maimaim-poana
Raha tena te hahafantatra ianao manao ahoana ny fahatongavan'ireo tampon'izao tontolo izao, ara-bakiteny, dia aza hadino ny hitsidika an'i An-tampon'i Burj Khalifa.
Ny packages dia manomboka amin'ny AED 150 isaky ny olona & ny ampahany, ny tranok'izy ireo dia manana karazana combo maro.
3. Ny Global Village
Alao sary an-tsaina a toerana izay ahitana ny lova maneran-tany, toerana ahafahanao mitsidika ireo tranobe sy tsangambato amin'ny firenena maro notadiavina, dia afaka mahita ny fampisehoana ny zavakanto nentin-drazana, ny sakafo sy ny asa tanana izay azonao ireharehanao ianao amin'ny fianakavianao sy havanao. Mety ho fantatrao tsara ny fitsidihan'ny firenen'ireto firenena ireto, ka na dia mirehareha hitsidika an'ireto firenena ireto aza ianao dia mety hianjera amin'izany ny olona.
Ao izy ireo dia manana fahatsiarovana, fofona, akanjo nentim-paharazana, sakafo, akanjo sy zavatra hafa. Mandehana amin'io tsy hay hadinoana io fitsangatsanganana ara-kolontsaina tany Dubai.
Ny toerana dia goavana ary mitaky ora kely 4 farafahakeliny.
Manomboka amin'ny 4 PM ka hatramin'ny 12 mamatonalina isan'andro (Oktobra-Aprily) & dia feno olona isaky ny ora mandalo & lalana mihodinkodina, ka manorata araka izany.
Azonao atao ny mahazo fanampiana amin'ny seza misy kodiarana ho an'ny be taona sy ny fidirana malalaka ho an'ny zokiolona.
Mitondrà rano & tsiro kely ampy (raha kely ianao ankizy), na dia misy aza ao anatiny
Mampiasà kiraro kanto sy mitondra sweatshirts
COST: Atena 15 isaky ny olona, ​​ankizy eo ambany 3 & zokiolona alefa
4. Miangona ao amin'ny Gold & Spice Souks, Al Village Village, Old Dubai & DHOW fitsangantsanganana
Visit Bur Dubai ary Deira, ho tratry ny fahanterana ianao & fahatsapana kely ho an'ny tsenan'ny Open Indianina indrindra fa ao amin'ny faritra Meenabazar. Eto ianao dia mahazo zava-manitra marobe amin'ny sasany izay tsy dia matetika azonao atao "Zatar". Namidy ny volamena Emira Arabo Mitambatra iray amin'ireo tsara indrindra, raha Indiana ianao, tsy maintsy fantatrao ny lanjan'ny metaly sarobidy ao amin'ny fiainantsika… na izany aza, ho hitanao ny drafitra izay tsy mbola hitanao teo aloha.
Tsidiho eo amin'ny havoan'i Abara, mahafinaritra ny mandeha ao an-tanàna mijery ny tontolo taloha sy ny tontolo vaovao ao Dubai coexisting.
Ao amin'ny Al Seef Village, ireo trano fisakafoanana dia natao toy ny trano fonenana ao an-tanàna Old Town Village & ity toerana ity dia tena tsara tarehy ho fohy, hampahatsiahy iray amin'ny Khau Gully an'i Delhi ...
COST: Dhow dia manomboka amin'ny AED 70, miankina amin'ny safidinao. Afaka mandehandeha ao amin'ny Abara Boats (AED 1 ihany) na handray taxi-rano (AED 20) na fiaramanidina mandeha sambo avy any Marina (AED 50). Mahavariana ny fomba fijery.
5. Atlantis ny Palm, Palm Jumeirah Island
izany kanefa, injeniera iray mahagaga ary nosy lehibe nataon'olombelona. Trano fiorenan'ny sasany amin'ireo olo-malaza manerantany. Ny hotely Atlantis dia hotely iray tsara tarehy hitsidika, ho an'ny zaridainany, ny efitrano very sns.
Hahazoana fomba fijery mahafinaritra amin'ny endrika palmie (AED 20 ho an'ny tapakila miverina), misintona amin'ny monorail, raha tsy izany afaka mandeha taxi ianao, indrindra fa raha vondrona lehibe ianao & tsy te handany be.
Sarany: Miankina amin'ny fotoana famandrihana
izany no izao tontolo izao lehibe zaridaina sy tsara tarehy indrindra, tsy azoko an-tsaina ny zavamaniry marobe izay tazonina tsara ao am-pon'ny firenena antsoina hoe arid, isan-taona dia manana haingon-trano izy ireo ary misy lohahevitra fanaovana sary sokitra toy ny fitiavana, fiaramanidina, taonan'i Mickey sns.
COST: AED 50per, ankizy mihoatra ny 12 taona 40 AED.
7. Ny Jumeirah Beach Corniche
Ny dianao tsy vita raha tsy misy sary Burj Al Arab ao an-tsainy. Manana fasika maro, fasika madio, shacks, trano fisakafoanana izy ireo, mandeha an-dalamby sy bisikileta, trano fidiovana tsara ary inona no tsy.
8. IMAGINE dia aseho amin'ny Festival City Mall
Ny Guniess Book Record no nandresen-dahatra mandritry ny fametrahana rano. Miaraka amin'ny loharano 30 sy feo manodidina azy mba hifandraisana amin'ireo mpihaino, ny IMAGINE dia fampisehoana toy ny mbola tsy fahita taloha. FAHORIANA!.
Free of cost. Ny fandaharana dia manomboka amin'ny 6.30 PM amin'ny ora fisakafoanana ora hatramin'ny 10.30 PM
9. Ny Frame Dubai
Na izany aza, ny endrika lehibe indrindra eto an-tany, toerana tsara tarehy. Tendrombohitra iray an'ny izay mampiseho ny lasa tany Dubai ary ny iray dia misy zava-misy virtoaly anao, tsara tarehy ao anaty io toerana io. Tokony mitsidika indray mandeha.
COST: AED 50 ho an'ny olon-dehibe, misy sasantsasany ho an'ny fianakaviana, fa ny ankizy eo ambany 5 dia maimaimpoana.
Toerana tsy maintsy averina aorian'ny filentehan'ny masoandro Toerana hotsidihina miaraka amin'ny ankizy dia mahafinaritra kokoa noho izany. Anisan'izany ny par Dinosaur, zaridainam-paharetana sy zaridainan'ny Ice (manana tapakila mitokana), saingy traikefa nahafinaritra amin'ny rehetra.
Misokatra amin'ny volana Oktobra & mbola mijanona hatramin'ny faran'ny volana May, vola AED 65 (alefaso ny ankizy eo ambany 3).
Dubai City Company manome tsara izao mpitarika ho an'ny asa any Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hanampy fampahalalana ho an'ny fiteny tsirairay ho anay Dubai mitsotra. Noho izany, ao an-tsaina, afaka mahazo tari-dalana ianao izao, toro-hevitra sy asa any United Arab Arab Emirates amin'ny fiteninao.
Ny fahadisoana diso nataon'ny mpitsidika 12 dia tsy tokony hatao eo amin'ny Metro Dubai
Toerana tsara indrindra fitsidihana sy fitsangatsanganana any Dubai amin'ny 2019
DUBAI: ohatra iray momba ny fampandrosoana